Xa iinkampani zikhetha oomatshini bokubekwa phambili, iimfuno ezintathu ezisisiseko kukuchaneka kokubekwa okuphezulu, isantya sokubekwa ngokukhawuleza, kunye nozinzo oluphezulu lokuqinisekisa ukubekwa kwesantya esiphezulu ngelixa lihlangabezana nokuchaneka kokubekwa kwezinto ezincinci. Ukufezekisa isiphumo esifunekayo, ukubekwa ngokufanelekileyo ...
Umatshini wokubekwa ulingana neerobhothi ezizenzekelayo. Zonke izinto ezenziwayo zigqithiswa ngabenzi boluvo emva koko bagwetywe kwaye basebenze ngengqondo ephambili. Amashishini eTopco aza kwabelana nawe ukuba umatshini wokubekwa unohlobo oluthile lwenzwa. 1. Inzwa yoxinzelelo Umatshini wokubekwa, kubandakanya v ...
Inkqubo yokwenziwa kwemveliso yezixhobo zeSMT intshayelelo
Ukusekwa komgca wemveliso ye-SMT yiprojekthi elandelelanayo. Impumelelo yokusekwa kwemveliso yemveliso ye-smt ichaphazela ngokuthe ngqo ukusebenza okuqhelekileyo kwemveliso yemveliso ye-SMT, nokuba ingafezekisa iziphumo ezilindelweyo, nokuba ingalufumana na utyalomali ngokukhawuleza ...
Yintoni endifanele ndiyiqwalasele ngaphambi kokusebenzisa umatshini wokubekwa
Amaxesha amaninzi, ukulungiselela ukusetyenziswa kwezixhobo zombane, asiyilandeli imiyalelo. Oku akuyi kubangela kuphela umonakalo kwizixhobo zombane, kodwa kuya kunciphisa ubomi bayo. Kukwenzeka oku xa sisebenzisa umatshini wokubekwa. Kufuneka silandele imiyalelo inf ...
Inkqubo yemveliso ye-SMT
1.Ukuprintwa kwesikrini: indima yayo kukuncamathelisa i-solder okanye ukubambelela kwi-pad ye-PCB ukuze kulungiselelwe ukuwelda kwezinto. Izixhobo ezisetyenzisiweyo ngumatshini wokushicilela wesilika (umatshini wokushicilela wescreen), ophambili kumgca wemveliso ye-SMT. 2. Ukuhambisa iglu: kuthontsiza iglu ukuya kwi ...
I-GUS-uphando kunye nophuhliso lomatshini wemaski
Iimaski, "njengesiqhelo" kunye nezixhobo ezicwangcisekileyo zokuthintela kunye nokulawula ubhubhane, zinqongophele kwaye zifuna kwihlabathi liphela, nakwezinye iindawo. Kula "bhubhane wemfazwe", singabunqanda ubhubhane kwangoko, sisindise ubomi kwangoko kwaye sidlule kubunzima ...
Xa kuthelekiswa netekhnoloji yemveli yokunxibelelana, i-5G inentsebenzo eyomeleleyo, izigcawu ezingakumbi kunye ne-ecology entsha, enokuhlangabezana ngokufanelekileyo neemfuno zesicelo seshishini lokuvelisa ngokwesiko kuthungelwano olungenazingcingo, kunye nokuqhuba ulwazi ...
ngomphathi ku 20-10-02
1. indibano esecaleni: Uvavanyo olungenayo => isilika yescreen yokuncamathelisa (indawo yokubambelela) => isiziba => ukomisa (ukuphilisa) => ukuhambisa kwakhona ukuwelda => ukucoca => ukuhlolwa => ukulungiswa 2. Indibano enamacala amabini: A : Uhlolo olungenayo => I-PCB yecala I-silk screen soldering paste (s ...